एउटा मुसा थियो । त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल को दूध, चिनी, चिसो आदि भण्डार गर्ने ठाउँ मा बस्दो रै’छ । हुन त मुसोबाट छुटकारा पाउन कठिन नै छ, सबैको घरमा कहिँ न कहिँ मुसो ले बास पक्कै गरेकै होला । तर पनि घरमा र विमानस्थलमा पाइने मुसोमा भिन्नता अवश्य हुन्छ । घरमा बस्ने मुसोलाई बिरालो ले बाँकि राख्दैन, उता विमानस्थलको मुसो ले भने प्लेन चढेर देश विदेश डुल्ने मात्र होइन, देशका अखबार देखि यही ब्लगमा समेत ठाउँ पाउँछ । मौका मिल्दा आक्कल झुक्कल टेलिभिजनमा नि देखिने मौका पाउँछ ।
मुसा विमान भित्र हुँदा, मुसाले विमान भित्र को तार काट्न सक्छ । यदि विमान उड्दै गरेको बखत कहिँ कतै मुसाले तार काट्न पाएको खण्डमा विमान ठूलो दुर्घटनामा पनि पर्न सक्छ । मुसाले यात्रीका मालसामान पनि काट्नसक्छन्, खानेकुरालाई दुषित बनाइदिनसक्छन् । अत: मुसा, विमान भित्रै भएको बखत उडान नगर्नु भन्ने गरिन्छ । तर यति थाहा हुँदा हुँदै पनि विमान उड्यो । समाचार मा पढियो, माथिको दवावमा क्याप्टेन ले प्लेन उडाए रे । दुइटा मध्ये एउटा विमान ग्राउन्डेड छ, अनि बाँकि एउटा विमान मा मुसो पसेको छ । नउडाएर पनि के गर्नु भन्या जस्तो ! मुसा ले १.३२ करोड घाटा लगायो भनेर त पत्रिका मै पढिएको छ, त्यो घाटा पुर्ति गर्न माथिकाले कति घोटाला गर्ने हुन् भन्ने कुरा त थाहा छैन तर यति थाहा छ, एउटा मुसा विमान चढेका कारण, घाटा लाग्यो । निगम भित्रका ले भ्रष्टचार मार्फत बर्सेनी कति करोड घाटा लगाइरहेकाछन्, थाहा छैन ।
मुसा रोक्नु हाम्रो वश को कुरो होइन तर पनि कता कता लाग्छ निगम का कर्मचारीहरु को गैरजिम्मेवारीपन यो कुराबाट पनि झल्किन्छ । विमान भित्र के लगिँदैछ भन्ने कुरा, चेक नै नगरि सिधै विमान मा पुग्ने हो र? विमानको सुरक्षित उडान को लागि विमान को नियमित चेकजाँच गर्नुपर्ने त छँदैछ, यसबाहेक विमान भित्र लगिने हरेक कुरा को कडाइका साथ चेकजाँच हुनुपर्छ ।
केही हप्ता पहिले बेङ्लोर बाट दिल्लि हुँदै काठमाडौँ आउँदा को प्रसंग हो । बेङ्लोर र दिल्ली मा गरिएको चेकजाँच को तुलनामा यहाँबाट निस्किँदा गरिने चेकजाँच साह्रै फितलो लाग्यो । भित्र छिर्दा कस्तो किसिम को चेकजाँच हुन्छ थाहा छैन, तर बाहिरिँदा भने खासै केही नगरिने रहेछ, अन्तराष्ट्रिय टर्मिनलमा । न एक्सरे मेसिन सबै चलेका छन् न केही व्यवस्थित नै लाग्छन् । बाहिरिँदा जस्तै भित्र छिर्दा पनि त्यस्तै चेकजाँच गरिने गरिएको छ भने, मुसो छिर्नु कुनै अचम्म को कुरो भएन । पहिले पनि कतिपटक मुसा छिरेको थियो होला, यो पटक देखियो र, पो यति धेरै हल्लाखल्ला गरियो, नदेखिएको भए विमान उडिरहन्थ्यो, मुसा डुलिरहन्थ्यो ।
चेकजाँचमा कडाइ गरिने हो भने, खानेकुरा का माध्यमबाट मुसो छिर्ने सम्भावना देखिँदैन । विमान भित्र लगिने हरेक चिज, एक्सरे मार्फत परिक्षण गरिनुपर्छ । मुसो विमान भित्र गएर, एकैपटक उत्पति नहुने हुँदा, यात्रुहरु र विमान को सुरक्षाको लागि पनि सुरक्षाव्यवस्था/चेकजाँच कडा पारिनुपर्छ । यस सम्बन्धमा निगम ले सोच्नुपर्ने देखिन्छ, साथै विमानस्थल र भण्डारण कक्षहरु पनि सफा र सुरक्षति राख्नु पर्ने देखिन्छ ।
अनि साँचि, मुसा को कथा भन्दै थिएँ । एउटा मुसा थियो, विमान मा छिरेछ, विमान उडेछ, मुसो ले देशदेशावर डुलेछ, मुसो भेटिएछ ! कथा सक्कियो ।
सायद मुसा को बारेमा समाचार छापिनु राम्रो पनि होला तर पनि पत्रपत्रिकाले मुसालाई चाहिनेभन्दा बढि प्राथमिकता दिए जस्तो लाग्यो । कान्तिपुर र नागरिक मा लगातार छापिएका कुराहरु ले भने मलाई दिक्क बनाए ! अरुलाई कस्तो लाग्यो थाहा भएन तर आफ्नो लागि चाँहि मुसा विमान मा छिरेको प्रसंग र पत्रिकाले दिएको खबर वाहियात र दिक्कलाग्दो थियो । मुसा छिर्यो, मुसो फेलापर्यो, मुसो फेरि फुत्कियो, मुसो फेला पर्यो । छिमेक मा भारत भएपछि, भारतिय न्युज च्यानल को प्रभाव नेपाल का रेडियो, टिभि, पत्रपत्रिका, वेवसाइटमा देखिनु खासै नौलो त भएन तर पनि… ! कान्तिपुर र नागरिक मा छापिएका केही मुसा सम्बन्धि समाचार यसप्रकार छन् ।
मुसा वोकेरै फर्कियो जहाज मलेसियावाट
चालकले भने 'मोबाइलमा फोटो देखाएर उडाउन दबाब दिइयो’
मुसाले पुर्‍यायो १.३२ करोड घाटा
समातेको मुसो पनि फुत्क्यो
मुसा नभेटी जहाज नउडाउने क्याप्टेनको अडान
निगमलाई हङकङमा उडान रोक्ने संकेत
नेपालको मुसो हङकङमा छोपियो
मुसा अझै गायब
ककपिटमै मुसा उफ्रिएपछि
मुसा फेला पर्‍यो, मध्यरातमा विमान मलेसिया फर्कियो
Narayan Amrit August 1, 2012 at 11:59 AM
kkkk August 1, 2012 at 11:59 AM
अनिल त नागरिक को दुस्मन हो क्या हो ? जहाँ नि नागरिक को खोइरो ?
PpP August 1, 2012 at 11:59 AM
Khai malai ta testo lagena ta. Paper ma yesto lekhya chha vanera lekhya ta chha.
प्रकाश समीर August 1, 2012 at 11:59 AM
भाग्यमानी मुसो रहेछ, भिषा न पासपोर्ट बिना कती देश भ्रमण् गर्न पायो। भो हाम्रा संचार माध्यमको कुरै नगरम् ।
Rabin August 1, 2012 at 11:59 AM
Vidfootie Nepal August 1, 2012 at 11:59 AM
k bhako nepal ma muso le po palne chhada n thaleo ta ....wants more news of sports http://www.vidfootie.com//soccer
rina August 1, 2012 at 12:00 PM
nepali unicode:moro muso bhagyamani raicha ni..... desh bidesh ghumyo ta... :D